5 Nzira Dzemifananidzo Dudziro Vhidhiyo Kuwedzera Inbound Kushambadzira Kugona | Martech Zone
5 Nzira Nzira Dzekutsanangudza Vhidhiyo Kuwedzera Inbound Kushambadzira Kubudirira
Svondo, Kukadzi 7, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Apo patinotaura Video chave chikamu chakakosha chehupenyu hwedu hwezuva nezuva, hatisi kutamba. Tinotarisa mavhidhiyo epamhepo zuva rega rega pamakomputa edu, nhare uye kunyangwe Smart TV. Zvinoenderana neYouTube, huwandu hwemaawa anoshandiswa nevanhu vachiona mavhidhiyo hwave pamusoro pe60% gore pamusoro pegore!
Zvinyorwa-chete-zvakavakirwa mawebhusaiti zvave zvechinyakare, uye hatisi isu tega vanozviti: Google iri! Injini yekutsvaga yepasirese # 1 inopa kukoshesa zvakanyanya zvemukati mevhidhiyo, ine 53x mimwe mikana yekuonekwa pane peji rayo rekutanga kupfuura zvinoita zvinyorwa-based webhusaiti. Maererano ne Cisco's trend analysis, na2018 vhidhiyo ichaita 79% yeese Internet traffic, kumusoro kubva parizvino 66%. Mabhizinesi anofanirwa kuve akagadzirira kubvira iyo online vhidhiyo boom haisi kuzononoka chero nguva munguva pfupi.
Zvinoenderana nechinhu ichi, ane hupenyu akatsanangura mavhidhiyo wave icing pane keke yechero nzira yekushambadzira online. Mazuva ese makambani mazhinji uye akawanda (makuru mabhizimusi uye kutanga-kumusoro zvakafanana) vari kushandisa vhidhiyo pamashambadziro avo ekutengesa, nekuda kwekuita kwavo kwakanaka pakutendeuka uye kudzvanya-kune-chiyero metric, pakati pezvimwe zvakawanda zvekushambadzira mabhenefiti.
Chii chinonzi Vatsananguri Vhidhiyo?
An Mutsananguri Vhidhiyo vhidhiyo ipfupi inotsanangura zano rebhizinesi kuburikidza nenyaya inoonekwa ine hupenyu. Kana pikicha yakakosha mazwi chiuru, vhidhiyo yakakosha mamirioni - ichipa nzira inovaraidza yekubvumira vashanyi kuti vanzwisise zvirinani zvigadzirwa kana masevhisi.
Heino vhidhiyo yazvino yekutsanangura yatakagadzira paCord Ropa Kubhengi, iri nyaya yakaoma kunzwisisa yakaitwa yakapusa nekushandisa kweiyo inotsanangudza vhidhiyo:
Kune ese marudzi emavhidhiyo ekutsanangudza anowanikwa - kubva pane akajeka machena machena mavhidhiyo kune yakaoma 3-D mifananidzo. Heino mhedziso yemhando dzetsananguro mavhidhiyo
Nei uchiita anotsanangura mavhidhiyo kuita mutsauko mushandirapamwe wekushambadzira uri mukati? Ngatitevere nhanho dzinowanzoitika dzekupinda mukati kushambadzira kuti tione kuti sei Mutsananguri Vhidhiyo inogona kusimudzira kushambadzira kwako uchishandisa imwe chaiyo data:
Anotsanangura Mavhidhiyo Anokwezva Vashanyi kune yako Webhusaiti
Imwe yematambudziko makuru emabhizimusi mazhinji epamhepo ndeye nzira yekukwezva vashanyi vatsva pamasaiti avo, mune mamwe mazwi, maitiro ekumisikidza pamapeji ekutanga eGoogle. Isu tinoziva kuti mavhidhiyo kana mapeji ane mavhidhiyo ane mukana uri nani kwazvo wekuverengerwa pane peji rekutanga remhedzisiro yekutsvaga pamusoro pemavara-akavakirwa pamapeji. Zvichitaurwa zviri nyore, zviri nyore kugaya uye kugovana - zvichivaita iwo akakwana zvemukati ekuvandudza yako yese chinzvimbo.
Mavhidhiyo chombo chisiri-chakavanzika cheSEO (yekutsvaga injini optimization). Mafirosofi eGoogle agara ari ekutsvaga iwo anobatsira uye anonakidza epamhepo zvemukati kwavari; uye vanoziva kuti vanotsvaga vanoda mavhidhiyo anogona kuvaraidza nekudzidzisa. Ichi ndicho chikonzero Google nekuchenjera inopa mubayiro mawebhusaiti ane vhidhiyo zvemukati nekuvaisa kumusoro Injini yekutsvaga inoona vhidhiyo seimwe yemhando dzinonakidza dzezvinhu zvepamhepo uye inovavarira kugutsa vashandisi vayo nekuratidza mavhidhiyo kutanga mumhedzisiro yekutsvaga. Hazvishamise kuti nei Google yatenga Youtube, vhidhiyo inotyairwa pasocial network iri zvakare yepasirose # 2 yakanyanya kushandiswa injini yekutsvaga.
Imwe mukana wekutsanangura wekushambadzira mavhidhiyo ndeavo kugoverana. Vhidhiyo ndiyo zvirinyore zviri pamhepo kukura pasocial media, iine gumi nemaviri mikana yekugovaniswa pane zvinongedzo uye zvinyorwa zvakabatanidzwa. Vashandisi veTwitter vanogovana mazana manomwe emavhidhiyo miniti yega yega, uye paYouTube anopfuura maawa zana emavhidhiyo akaiswa muyakaenzana nguva.
Maererano ne Facebook, vanhu vanodarika makumi mashanu kubva muzana vanodzoka kuFacebook mazuva ese kuUS vanoona vhidhiyo imwe chete zuva nezuva uye 50% yevanhu vari muUS vanoshandisa Facebook vanoti vanowana mavhidhiyo avanotarisa paFacebook. Nekuva nevhidhiyo yekutsanangudza pane yako saiti, kugona kwako kuwanikwa uye kugovaniswa nevateereri vakatariswa kunovandudzwa zvakanyanya kana uchishandisa mavhidhiyo.
Asi mira, pane zvakawanda.
Anotsanangura Mavhidhiyo Anoshandura Vashanyi Kuita Leads
Ok, ikozvino zvawakawedzera kushanya kwako nevhidhiyo inotsanangura, ungaita sei kuti vashanyi ivavo vatungamire? Anotsanangura mavhidhiyo anotendera yako brand kuti dzikunura pani yakakwana nguva dzese. Uye nguva chinhu chakakosha. Ivhareji yekutarisisa kwevanhu pane yakajairwa zvinyorwa-yakavakirwa webhusaiti ingangoita masekondi masere, yakaderera pane iyo nguva yekutarisisa yehove yegoridhe! Kuti ubate kufarira kwevashanyi vako, unofanirwa kuendesa meseji yako nekukurumidza uye zvine mutsindo. Izvo hazvisi zvekuvakwezva chete, zviri kuvaitisawo kuti vagare kwenguva yakareba zvakakwana kuti vanzwisise bhizinesi rako chirevo.
Vhidhiyo inotsanangurwa yakaiswa pamusoro pehomwe pane peji rako rekumisikidza mhedzisiro mukushanya kuri kuwedzera kubva ipapo yekutanga masekondi masere kusvika pamaminetsi maviri paavhareji. Iko kuwedzera kwe1500% mukubata! Uye inguva yakaringana yekuti vhidhiyo ibudise meseji yako uye kutyaira vateereri vako kuti vatore matanho. Kushandisa inoshanda kudana-ku-chiito mukati mevhidhiyo yako kunogona kutyaira vashanyi kunyorera kune tsamba, kunyoresa muyedzo yemahara, kukumbira kubvunza, kana kurodha pasi eBook. Mavhidhiyo anoshandura vashanyi kuva anokwanisa mafambiro.
Iwo iwo anotungamira anonyatso kuenda kunotenga chigadzirwa chako kana sevhisi nekuda kwe anotsanangura video?
Anotsanangura Mavhidhiyo Anotungamira Anotungamira kuva Vatengi
Isu tatojekesa kuti mavhidhiyo eanotengesa anokwezva sei vashanyi uye anovaendesa, saka ikozvino tauya kunhamba dzinoguma dzinonyanya kukosha kune chero bhizinesi repamhepo: kutengesa.
Vhidhiyo inotsanangura inzvimbo ine hunyanzvi hwekudzora mukana-mutengi-kurasikirwa nekuwedzera nekuchengetedza vashanyi uye inotungamira manhamba akatsiga nzira yese kuburikidza nerwendo rwekushambadzira. Asi zvinozviita sei? Huye, iro rinobata simba revatsananguri vhidhiyo rinogona kusvika kune vateereri vako pamatanho mazhinji! Heano mimwe mienzaniso:
Hukuru kutaura nyaya uye zvinoonekwa ita vako vanogona kuve vatengi varangarire bhizinesi rako chirevo: paavhareji vanhu vanoyeuka 10% yechero data rinoonekwa mazuva matatu mushure uye kusvika ku3% yeruzivo rwekuona (Western Ontario University research). Chokwadi chinoratidza kuti 70% yevashanyi uye 85% yevatengi vepamhepo vane mukana wekutenga chigadzirwa kana sevhisi kana vachikwanisa kuona vhidhiyo kuzvitsanangura zvisati zvaitika.
Mavara anodikanwa zvichaita kuti vateereri vako vabatanidzwe nechiratidzo chako padanho rakadzama remanzwiro.
E-mail kushambadzira ndeimwe nzira yekushambadzira inogona kusimudzirwa nekuiswa kwevhidhiyo: tinya-kuburikidza mwero inowana iyo 100% kuwedzera paavhareji uye kunyange mae-mail kungori neshoko Video mumusoro wenyaya yavo wedzera yavo yakavhurika mwero kubva pa7 kusvika 13%.
Hafu (52%) ye nyanzvi dzekutengesa pasirese vanotaura vhidhiyo se zvirimo online neinodzoka yakanakisa mukudyara.
Mutsananguri Vhidhiyo Nyaya Dzidzo
Crazy Egg, sevhisi yakagadzirwa naHiten Shah naNeil Patel, yakawedzera shanduko ne64% uye yakaita madhora zviuru makumi maviri nezviviri zvemari yekuwedzera pamwedzi pavakaisa vhidhiyo inotsanangudza peji ravo rekumhara. Iyi ndiyo vhidhiyo yavo:
Dropbox yakaburitsa 10% yekushandurwa kuwedzera kubva kune yavo inotsanangura vhidhiyo, ichiita $ 50 mamirioni mune yekuwedzera mari mu2012 chete. Zvinoshamisa, huh?
Anotsanangura Mavhidhiyo Anoshandura Vatengi kuva maPromoter
Saka, pano isu tiri padanho rekupedzisira. Iwe une vatengi vakatotenga chigadzirwa chako kana sevhisi, uye vakaifarira! Saka, vhidhiyo inotsanangudza ingabatsira sei kuvaita vanosimudzira?
Kana vatengi vachida chigadzirwa chako kana sevhisi (uye nei vasingadaro, handiti?), Vangangodaro vagovera yako inotsanangudza vhidhiyo pamasocial network zvakare seFacebook, Twitter kana Youtube, vachiparadzira shoko kunze uko kushamwari uye vavanoshanda navo (don usanyara, uye ukumbire kuti vagoveranewo).
Vhidhiyo inotsanangudza ndicho chidimbu chinogoverwa zvemukati online, uye ndizvo zvinoita kuti ive chinhu chakanakira vatengi vako kuti vakukurudzire kuburikidza nechaunga chavo chezvemagariro. Semuenzaniso, heino vhidhiyo yekutsanangudza iyo yakasvika angangoita zviuru makumi mashanu neshanu paYouTube chete:
Anotsanangura mavhidhiyo chinhu chakakosha mukushandura vatengi vako kuita nharaunda, futi! Isu tinoziva kuti kushambadzira kwemuromo ndeimwe yenzira dzinonyanya kushambadzira pamhepo - uye kupa vhidhiyo kune vatengi vako kuti vagovane nezve bhizinesi rako rinovapa simba rekugovana nekukutsigira nekukurumidza uye nyore.
Wona Yedu Portfolio Tora Tsika Quote
Nepo kudyara kwacho kuchinyanya kupfuura chinyorwa, infographic kana kunyangwe yakaoma chena bepa, vhidhiyo yekutsanangura inogona kushandiswa pamasvikiro, uye pamapeji akati wandei uye mapeji ekumisikidza pane yako saiti. Izvi zvinosanganisa kugona kwayo kutyaira uye kushandura vashanyi - ichipa inoshamisa kudzoka kune inivhesitimendi.
Tags: anotsanangura mavhidhiyoinbound Marketingkumhara kushandurwa kwemapejikutendeuka kwevhidhiyovhidhiyo pamapeji ekumharayum yum mavhidhiyo
Funga Mukati meBhokisi neiyo Entrata Kushambadzira Suite
Apr 15, 2015 pa 11: 51 AM
Ini 100% ndinobvumirana nekukosha kwekutsanangura mavhidhiyo. Ini ndangotanga kambani yangu ndinovimba handina kunonoka kupinda mubhizinesi 🙂
Ndiri kuzoratidza vatengi vangu vemangwana iyi posvo kana vakambondibvunza kuti nei aya mavhidhiyo akakosha. Ndatenda!
Gumiguru 25, 2015 pa 12:32 AM
Chinyorwa chikuru! Chinhu chega chirikushaikwa kuraira pamaitiro evhidhiyo inofanirwa kuenda zvichienderana nechigadzirwa kana sevhisi yaari kuyedza kusimudzira. Semuenzaniso, mumwe munhu angafunga sei kuenda neakapetwa 2D mifananidzo - seiyi https://www.youtube.com/watch?v=liGvS4j0lKI kana yeiyo 3D animation - seiyi https://www.youtube.com/watch?v=Q6cx_MJ9nsA ? Ndedzipi nzira dzinofanirwa kutungamira sarudzo dzedu?
Gumiguru 25, 2015 na1: 41 PM
Ini handina chokwadi chekuti kukura kwacho kwakakosha senge script. Mifananidzo inoita kuti ugone kutaura nyaya nenzira yaungade kuti iudzwe - usina nguva nemari yekumisikidza zviitiko, vatambi, nezvimwe. Ini ndinowedzera iyo 3D animation, kunze kwekunge yaitwa zvisingaite mushe, inogona kutaridzika kunge isingabatsiri. Nehurombo, veruzhinji vakashandiswa kuPstrong uye yakanyanya mhando mhando 3D animation… kana iwe usingakwanise kufanana nehunhu ihwohwo, zvinogona kusabudirira.
Aug 27, 2017 pa 10: 46 AM
Ini ndingaite sei kuti ndishandise izvi kune mune akasungwa mafoni nzvimbo uko tarisiro iri kuenda kunodana mukati.
Unoita sei iwe kugadzira mabara akakodzera uye kuti mutengi kana bhizinesi atore kambani zvakakomba pakuratidzira maringe neicho chaicho kugadzirwa kwehupenyu nevatambi